နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများအား လက်လီ လက်ကား ရောင်းချခွင့် ပြုလိုက?? - Yangon Media Group
နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများအား လက်လီ လက်ကား ရောင်းချခွင့် ပြုလိုက??
နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီ၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပဖက်စပ် ကုမ္ပဏီများအား လက်လီလက်ကားရောင်းချခွင့်ပြုလိုက်ပြီးနောက် စူပါမားကက်လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ဂျပန်လုပ်ငန်းရှင်များစိတ်ဝင်စားနေကြောင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၊ ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။ စားသုံးသူများအတွက် ဈေးနှုန်းလျှော့ချပြီး ရွေးချယ်ခွင့်ပိုမိုရ ရှိလာစေရန်ရည်ရွယ်၍ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပဖက်စပ် ကုမ္ပဏီများအား လက်လီလက်ကား ရောင်းချခွင့်ကို စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေပုဒ်မ၁၃၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)အရအပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ မေ ၉ ရက် ရက်စွဲဖြင့်ခွင့်ပြုအမိန့်ကြော် ငြာစာကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းကဲ့သို့ခွင့်ပြုလိုက်ခြင်း ကြောင့် လတ်တလောတွင် လက်လီလက်ကားရောင်းချခွင့်နှင့်ပတ်သက် ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့်ပြည်ပကုမ္ပဏီ မရှိသေးသော်လည်း ဂျပန်နိုင်ငံအ နေဖြင့် စူပါမားကက်လုပ်ငန်းများတွင် ဝင်ရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် စိတ်ဝင်စားမှုရှိနေကြောင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၊ ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးသန်းအောင်ကျော်က မေ ၁၉ ရက်တွင် ပြောသည်။ ”ခွင့်ပြုလိုက်တာမကြာသေး ဘူးဆိုတော့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ ကုမ္ပဏီက တော့မဝင်သေးဘူး။ လက်ကားရောင်းချခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့လာ ရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့အခါ ဆောင်ရွက်ရမယ့်အရာတွေကို လာစုံစမ်းတာတော့ ရှိနေပြီ။ အဲဒီထဲမှာ ဂျပန်လုပ်ငန်းရှင်တွေများတယ်။ စူပါမားကက်လုပ်ငန်းကဏ္ဍမှာဝင်ရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ကို စိတ်ဝင်စားနေ ကြတယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။
ယင်းသို့ လက်လီလက်ကား ရောင်းချခွင့်ပြုခြင်းကြောင့် လက်လီလက်ကားရောင်းချဖြန့်ဖြူးသူများအကြား မျှတသောယှဉ်ပြိုင်မှု တိုးတက်စေခြင်းအားဖြင့် စားသုံးသူများအတွက်ဈေးနှုန်းလျှော့ချပြီး ရွေးချယ်ခွင့်ပိုမိုရရှိလာနိုင်ခြင်း၊ ရောင်း ချဖြန့်ဖြူးမှုလုပ်ငန်းများတွင် ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးနှင့် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေး၊ နည်းပညာများ တိုးတက်လာနိုင်ခြင်း၊ ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်များဈေးကွက်ပိုမိုရရှိ၍ အသေးစားအလတ်စားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနိုင်ကြောင်းသိရသည်။ ယင်းလက်လီလက်ကားရောင်းချခြင်းကို ဂျပန်နိုင်ငံအပြင်ထိုင်းနိုင်ငံကလည်း ဝင်ရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း ဦးသန်းအောင် ကျော်ကသုံးသပ်ပြောသည်။
ပြည်ပကုမ္ပဏီများကလက်လီလက်ကားရောင်းချမှုများကို ဝင် ရောက်ဆောင်ရွက်ပါက စားသုံးသူများအနေဖြင့် အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည့်ပစ္စည်းများကို ပိုမိုရွေးချယ်လာနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ယင်းကဲ့သို့ ပြည်ပမှကုမ္ပဏီကြီးများဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်လျှင် ကုမ္ပဏီသေးများအတွက်ရင်ဆိုင်ရန် အခက်အခဲများဖြစ် ပေါ်လာနိုင်ကြောင်း လက်လီဖြန့် ဖြူးရောင်းချနေသူတစ်ဦးက ပြောသည်။ ယင်းလက်လီလက်ကားရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံသားကုမ္ပဏီ၊ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီ၊ ပြည်တွင်း/ပြည်ပဖက်စပ် ကုမ္ပဏီများသည် စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး စည်းကမ်းချက်များ ကိုလည်း လိုအပ်သလိုပြင်ဆင် သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။
နိုင်ငံတော် အစိုးရ၏ မူဝါဒအသစ်များနှင့်အညီ ဆေးဝါး ကဏ္ဍနယ်ပယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် အားပေးကူည
သိမ်းဆည်းမြေများပြန်ပေးရန် (သို့မဟုတ်) လျော်ကြေးငွေရရှိရေး အမြန်လမ်းတွင် တောင်သူများဆန္ဒထု